National Power News:: साथीले अफर गरेर पहिलो चोटी अभिनय गरेको हो ; कलाकार मुकेश कुमार ठाकुर National Power News:: साथीले अफर गरेर पहिलो चोटी अभिनय गरेको हो ; कलाकार मुकेश कुमार ठाकुर
साथीले अफर गरेर पहिलो चोटी अभिनय गरेको हो ; कलाकार मुकेश कुमार ठाकुर
काभ्रेपलाञ्चोक, पछिल्लो समयमा नेपाली गित संगित क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कलाकार आउने क्रम जारी छ । केही कला भएर आएका छन भने कोही कला बिना नै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । युटुब र सामाजिक संञ्जालमा भाइरल भएका धेरै कलाकारहरु केही दिन सम्म मात्रै टिक्ने चलेका पुराना कलाकारले बताउदै आएका छन् । बिमल अधिकारीले पछिल्लो समयमा भाइरल भएका सचिन परियार लाई प्रयोग गरेको देखी लिएर स्टुटियो लाई बाख्राको खोर भनेका आदी कुरा समाजिक संञ्जालमा भाइरल छन् । टिकटक र युटुबले नयाँ नयाँ प्रतिभाहरु लाई मिडियामा लिएर आउदाँ यतिबेला पुराना कलाकारहरु ओझेलमा परेका छन् ।
पुराना कलाकारहरु लाई चलाउन उनिहरुले खेलेका भिडियो गितलाई भाइरल बनाउनको लागी सामाजिक संञ्जाल र टिकटकमा केही फलोअर भएका कलाकारहरु लिन थालिएको छ । यसरी पुराना कलाकारहरु लाई चलाउन नयाँ आउने क्रममा रौतहट जिल्लाको सिवनगरका बुबा राम चन्द्र ठाकुर र आमा कौसिला देबीको छोरा नव कलाकार मुकेश कुमार ठाकुर खुच्चिङ खुच्चिङ बोलको गितमा अभिनयका साथ गित सँगित क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । सानो उमेर देखी नै कलाकार बन्ने चाहाना भएको बताउदै कसैले पनि आफुलाई अवसर नदिएको हामीलाई बताए । कला भएर मात्रै पनि नहुने रहेछ सबैको आ आफ्नो मानिसहरु हुनु पर्ने बताउदै, कलाकारीता क्षेत्रमा केही गर्ने सोच बिचारका साथमा आएको छ्ु अब मलाई केही गरेर देखाउनु पर्ने छ । सबैको अगाडी उदाहरणीय पात्र बन्छु ठाकुरले भने घुम्न, खेल्न, अभिनय गर्न, गित गाउन मन पराउने मुकेश कुमार ठाकुरको बालापन रौतहटमा नै बितेको र अहिले कर्मथलो भने काठमाण्डौलाई बनाएका छन् । प्रस्तुत छ नव क्षितिज साप्ताहिको लागी अरबिन्द्र गौतमले नव कलाकार मुकेश कुमार ठाकुरसँग गरेको बिशेष कुराकानी
० आज भोलि केमा व्यास्त हुनुहुनछ ?
केही दिन अगाडी मात्रै मैले अभिनय गरेको खुच्चिङ खुच्चिङ बोलको गित सार्वजानिक भएको छ । यस गित बाट नै मैले कलाकारीता क्षेत्रमा पाइला अगाडी बढाएको छु । अब निरन्तर कलाकारीता क्षेत्रमा लाग्ने छु । दर्शक श्रोताले के कति माया गर्नु हुने छ त्यो त र्हर्न बाँकी नै छ । मैले सकेको गरेर दर्शक लाई देखाउने छु ।
० तपाईले अभिनय गरेको गितले कतिको सफलता पाउँला ?
यो मेरो पहिलो गित हो । यस गित बाट नै मैले क्यामेरा फेस गरेको छु । अल्लि अल्लि डर लागेको थियो तर पनि सोचे मैले अब केह्ी गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथमा लागे । गित सोचेको भन्दा धेरै राम्रो छ । मैले अभिनयमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ र गर्छु । खुच्चिङ खुच्चिङ गित राम्रो बनेको छ अहिले सम्म दर्शक श्रोताहरु र साथि भाईहरुको प्रतिक्रया राम्रो नै छ । अब अल्लि पछि सम्म हेदै जाँउ के कस्तो हुन्छ ।
० कलाकारीता क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने सोच बिचार कता बाट आयो ?
गित गाउने, अभिनय गर्न सोच बिचार त धेरै पहिला देखी नै थियो सानै उमेर देखी गित गाउन अभिनय गर्न मन पराउथे, पछि बिस्तारै गित संगित सँग आबब्द साथि भाईहरु भेटिन थाले यस बाट झनै चाहाना बढदै गयो । एक दिन एउटा साथिले भन्नु भयो गितको लागी अनि मैले पहिलो गित खुच्चिङ खुच्चिङमा अभिनय गरे अहिले गित बजारमा छ ।
० अभिनय गर्न कतिको गार्यो लाग्यो ?
मैले पहिला कहिले पनि क्यामेरा फेस गरेको थिइन यो नै पहिलो पटक हो । त्यसैले अलि अलि त गार्यो नै भएको थियो तर पनि मैले केही गर्नु पर्छ भन्ने उदेश्यको साथमा हिम्मत नहरी काम गरेको छु । काम त सबै गर्न गार्यो नै हुन्छ जुन सुकै काम पनि तर त्यसलाई कसरी सजिलो बनाउने र गर्ने आफ्नो सोच बिचारमा भर पर्छ ।
० कस्ता कस्ता गितमा अभिनय गर्न मन लाग्छ ?
सुरुमा भन्नु पर्दा म अभिनय गर्न रुचाउने मानिस हुँ । अभिनय गर्न रुचाउनेले जुन सुकै गितमा पनि अभिनय गर्नु पर्छ । धेरै जसो आधुनिक, पप, लोक दोहोरी गितमा अभिनय गर्न रुचाउछु । अल्लि धेरै चाँही आधुनिकमा पाइयो भन्ने खुसी लाग्छ तर आएका सबै गितमा मैले सकेको गरेर देखाचउने छु फिर्ता जानु पर्न हुदैन ।
० कलाकारीता क्षेत्र बाट जिबन चलाउन सकिदैन नि ?
सानो उमेर देखीको चाहाना रुचि नै कलाकारीता क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हो । मलाई यस क्षेत्र बाट जिबन चलाउनु पर्न पनि छैन् । मेरो छुट्टै व्यावसाय पनि छ, असिफमा काम गर्छु मलाई गार्यो छैन । सबै आ आफ्नो रहर चाहाना लाई पुरा गरेर समाजमा आफ्नो नाम सुपरिचित बनाउने उदेश्यका साथमा आएको छु ।
० सबै काम एकै चोटी कसरी गर्नु हुन्छ ?
यो सब आफ्नो चाहाना रुचि हो । यदि मन छ भने ज जति काम पनि समय मिलाएर गर्न सकिन्छ । मन नै छैन भने त कहाँ बाट सम्भब हुनु सबै काम लाई समय मिलाएर अगाडी बढिरहेको छु । चायो भने असम्भब कुरा केही पनि छैन त्यसैले पहिला कुरो चाहाना हुनु पर्छ अनि मात्र सबै काम सम्भब छ ।
० कलाकारीता क्षेत्रमा प्रेरणाको श्रोत ?
सुरुमा त मैले पहिला नै भनि सके रुचि चाहाना इक्षा हुनु पर्यो बल्ल यो सबै भए पछि बिस्तारै मिल्दै आउँछ । सानै देखीको मेरो चाहाना कलाकारीता क्षेत्रमा लाग्ने थियो । पछि बिस्तारै गित संगित कलाकारीता क्षेत्र सँग आबब्द साथिहरु भेटिन थाले घुल्मिल धेरै नै हुन थालिसके पछि साथिले अफर गरेर पहिलो चोटि अभिनय गरेको हो ।
० जिवन के हो ?
मलाई लाग्छ सुख दुखको साथि हो ।
० आगामी योजना के बनाउनु भएको छ ?
क्लाकारीता क्षेत्रमा पाहिला अगाडी बढाएको छु । यस लाई निरन्तरता दिने र आफ्नो नाम लाई सबै माझ लोक प्रिय सबैले चिन्ने खालको बन्ने उदेश्यका साथमा अगाडी बढने छु । गित संगित बाट टाडा हुने छैन । सम्पुर्ण दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सक्ने खालको बन्ने तयारीका साथमा आएको छु ।
म भखरै मात्रै कलाकारीता क्षेत्रमा लागेको, केही गर्न सोच बिचार लिएर अगाडी बढेको, मानिस मलाई हजुरको यो पत्रिकाले यति स्थान दिनु भनेको सबै भन्दा ठुलो कुरा हो । हजुर र पत्रिका प्रति सदैब आभारी हुने छु । केही गर्न सोच बिचारका साथमा आएको छु सम्पुर्ण दर्शक श्रोताहरुलाई माया गरी दिन आग्रह गर्दछु ।